विज्ञापनदाताहरू कसरी मार्च पागलपनमा क्यापिटल हुँदैछ? | Martech Zone
बुधबार, मार्च 16, 2016 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
2015 मा, त्यहाँ थिए ११..11.3 मिलियन औसत कुल दर्शकहरू एनसीएएको मार्च पागलपन, एक रेकर्डको साथ .80.7०..XNUMX मिलियन प्रत्यक्ष भिडियो स्ट्रिम दर्शकहरु। सबैभन्दा धेरै हेरिएको खेल आकर्षित भयो २.28.3..XNUMX मिलियन कुल दर्शकहरू। यदि तपाईंलाई यो ठूलो कुरा लाग्दैन भने, तपाईंले यस महिना डाउनटाउन इंडियानापोलिसमा काम गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ (जहाँ हाम्रा कार्यालयहरू छन्)! हामी घरबाट महिनामा काम गरिरहेका छौं।
यो Koeppel Direct बाट इन्फोग्राफिक विशाल अवसर ब्रान्डहरू र मार्केटरहरू मार्फत खेल प्रशंसकहरूमा पुग्न हाइलाइट गर्दछ क्रस उपकरण विज्ञापन मार्च पागलपन को समयमा।
गत वर्षको मार्च पागलपनको मार्केटिंग तथ्याats्क आश्चर्यजनक थियो - १२126 ब्रान्डले Mad० सेकेन्डको टेलिभिजन स्पटहरूमा १.१1.163 अरब डलर खर्च गरे जुन मार्च पागलपनमा प्रत्येकको औसत १.30 मिलियन डलर थियो। तर त्यो हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो। मार्च पागलपन मार्केटिंग crossतु क्रस-डिभाइसको विज्ञापनको लागि ठूलो अवसर हो, र यो बर्षको मार्च पागलपन दर्शकहरू टेलिभिजनबाट टाढा अधिक सामग्री पहुँच गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
मार्च पागलपनमा डिजिटल विज्ञापन खर्च स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा .30.4 27.6 बिलियन थियो र निश्चित रूपमा यस वर्ष यस रेकर्डलाई हराउनेछ। अर्को $ २.XNUMX.। अरब डलर डेस्कटप र ल्यापटप विज्ञापनहरूमा खर्च भएको थियो १.17.8..XNUMX मिलियन घण्टा भिडियो स्ट्रिमि।.
दोस्रो र तेस्रो स्क्रिनहरू अधिक लोकप्रिय हुने बित्तिकै विज्ञापनदाताहरू टेलिभिजन, डेस्कटप, ट्याब्लेट र स्मार्टफोन बीचमा क्रस-डिभाइस दर्शकहरूको फाइदा लिन काम गरिरहेका छन्। जिज्ञासु अरु को लागी पैसा को लागी योजना, कहाँ उनीहरु ती विज्ञापन डलर खर्च गर्न योजना, र वास्तवमा कति? यहाँ तपाईं जानुहोस् ...
टैग: मार्च पागलपनमार्च पागलपन विज्ञापन खर्चमार्च पागलपन विज्ञापनएनसीएएखेल बजार
हामी अब एप्पल समाचारमा उपलब्ध छौं!